बडीगाडको बाढीले बागलुङ,गुल्मी,पाल्पा समेत २१ जनाको मृत्यु, कैयौँ बेपत्ता ! | TAJBIJ.COM
July 26, 2016 तजबिज खबर	Leaveacomment
बडीगाडको बाढीले वुर्तिवाङ् देखि रिडी सम्म उच्च जोखिममा !
प्रेम सुनार गुल्मी २०७३ साउन ११ ।। अविरल वर्षा र बाढी पहिरोले बागलुङ, गुल्मी , पर्वत, स्यांजा , अर्घाखाँची र प्युठान जिल्लामा ठुलो जीउधनको क्षति भएको छ । गए राती देखि अहिलेसम्म गुल्मीमा एक जना वेवरिसे पुरुष रहस्यमय रुपमा खोलामा मृत फेला सहित ६ जना मृत फेला परेका छन भने ३ जना घाईते भएका छन् । जिल्लाको १ नम्वर क्षेत्रको भुर्तुङ्ग रविशुखर्कमा एक घर बगाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यस क्षेत्रका दर्जनौ घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।
क्षेत्र नम्वर २ को रिडी, गौडाकोट खज्र्याङ्ग र वडागाउँ गाविस अविरल वर्षाबाट नराम्री प्रभावित भएका छन् । गौडाकोट ७ कि पवित्रा थापा, यानीकला थापा र तुल्सा सुवेदी ढिस्कोलेच्याँपेर घाईते भएका छन् । उनिहरुको गोठ पहिरोले बगाएको छ । खज्र्याङ्ग फाँट डुवानमा परेको र कैयौं घरहरु उच्च जोखिममा रहेको सहकर्मी रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार खज्र्याङ्ग खोलाले त्यहाँको १५ रोपन खेत डुवानमा परेको छ । खज्र्याङ्गका ध्रुर्व कँडेलको घर पहिरोले उच्च जोेखिमा पारेको छ । पहिरोले अमरअर्वाथोक गौरी पोखरा सडकखण्ड अवरुद्ध पारेको छ । खज्र्याङ्ग निर्माणधिन पुल ठेकेदारले काममा ढिला सुस्ती गर्दा गरिएको थोरै काम पनि पहिरोले क्षति ग्रस्त बनाई दिएको छ ।
उता बडागाउँ ६ को जलुके भन्ने गाउँमा चारैतिरबाट आएको पहिरोले दर्जनौ घरहरु उच्च जोखिममा रहेको सहकर्मी अशोक सोमैले जानकारी दिए । भुवाचिदीका समाज सेवी ज्ञानुसापकोटाका अनुसार भुवाचिदी वजारको त्रिभुवन राष्ट्रिय उच्च मावि भित्रै बडिघाट खोलाको वहाव पसेको छ । त्यहाँको पुल बगाएर लैजाने खतरा बढेको छ । गुल्मीको अरेवा र बागलुङको ग्वालिचौर जोड्ने वालुवा वजारको पुल पनि बगाएको छ । बडागाउँको झेदीमा रहेको पौवा पनि बडीगाड खोलाले बगाएको छ ।
झेदीबाट अजुर्न केसीले दिएको जानकारी अनुसार झेदीको पुलको ओल्लोभाग खोलाले बगाउनै आँटेको छ । मुसिकोट वामी टक्सार जोड्ने सुदिको पुल पनि खोलाले बगाएको छ । चोरकाटेवजार पुर्ण रुपले डुवानमा परेको छ । केहि टहरा पसलहरु बगाएको छ । चोरकाटेका वासीन्दाहरु माथी गाउँ तिरको सुरक्षित बस्तीमा सरेका छन् ।
रिडीका केहि घर टहराहरु पनि बगाएको छ । उल्लीखोला बजार पनि उच्च जोखिममा छ । गुल्मी , स्याङ्गजा र पर्वतको संगम स्थल पनि डुवानमा परेको छ । कालिगण्डकी नदि किनार देखिधेरै टाढा र सुरक्षित स्थानम मानिएको भित्र मन्दिर परिसर समेत डुवानमा पर्नुले अहिले सम्मकै ढुलो पानीको वहाव बढेको स्थानियले बताएका छन् ।
बागलुङमा ३ को मृत्यु २ वेपत्ता
उता बुर्तिवाँ देखि माथी अधिकारीचौरको पहाडमा पहिरो जाँदा बडिगाड खोला नै थुन्ने खतरा बढेको बताईएको छ । बुर्तिवाङ ईलाका प्रहरी कार्यालयले टेलिफोनको टावर समेत पहिरोले बगाउँदा ल्याण्लाईन टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको बताएको छ । बागलुङका जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्ष् चक्रबहादुर सिंहका अनुसार बागलुङ दर्लिङ ३ मा एक जना र राजकुत ७ मा २ जना सहित तिन जनाको पहिरोले पुरेर मृत्यु भएको छ । दर्लिङमै २ जना वेपत्ता भएका छन् । प्रनाउ सिंहका अनुसार मृत्यु हुनेहरुमा दर्लिङ ३ की १७ वर्षिया यमुना बुढामगर र राजकुत ७ की ८ वर्षिया दुजे तामाङ र २२ वर्षिया डिकी तामाङ रहेका छन् ।
पाल्पाबाट पत्रकार रेखीराम रानाले पठा्एको समाचार अनुसार जिल्लाको विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले घर पुरिदा चार जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लाको दक्षिणी भेगस्थित गोठादी–५, मनसेवा दमारमा पहिरोले घर पुर्दा एकै परिवारका तीन जनाको ज्यान गएको छ । पहिरोले घर पुर्दा ४९ वर्षका दामबहादुर कनौजे, उहाँकी श्रीमति ४० वर्षकी खगीसरा र ९ वर्षकी छोरीयशोदा कनौजे मृत्यु भएको छ ।
दुई सय ५० मीटर माथिबाट भत्केको पहिरोले घरसहित सुतिरहेका तीन जना परिवारलाई च्यापेको दामबहादुरका दाजु प्रेमबहादुर कनौजेले बताए। सोमबार रातिदेखि परेको पानीका कारणराति साढे १२ बजे पहिरो गएको दाजु प्रेमबहादुरले जानकारी दिए े । नजिकै रहेको गोठमा सुतेका दामबहादुरका तीन छोराहरू भने सकुशल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएकोछ ।
त्यस्तै यस्तै पहिरोले घर बगाउँदा दोभान–१, झुम्साकी १६ वषिया अस्मिला विश्वकर्माको ज्यान गएको छ । तिलोत्तमा मावि, झुम्सामा कक्षा ९ मा अध्ययन्रत छात्राको पहिरोमा परी मृत्युभएको दोभान प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मङ्गलबार बिहान ४ बजेतिर माथिबाट गएको पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत झुम्सा सडक छेउमा रहेका ६ वटा घरहरू समेत पहिरोलेबगाएको छ ।
एक्कासी पहिरो आएपछि घरमा सुतिरहेका सबै उठेर भागे पनि अस्मिता विक, मुना विक र धनवीर विकलाई पहिरोले बगाएको थियो । मुना र धनवीर सुनारको सकुशल उद्दार गरिएको छ भनेअस्मिताको घटनास्थल मै मृत्यु भएको स्थानीय शान्ति विश्वकर्माले बताए ।
सोमबार रातिदेखि परेको अबिरल वर्षाले विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो जादा सडक अबरुद्ध भएका छन् । तानसेन–बुटवल सडकखण्डको सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरो खसेर अबरुद्ध हुँदा हजारौँयात्रुहरूले सास्ती बेहोर्नु परेको थियो । पहिरोले अबरुद्ध सडक मङ्गलबार दिउँशो ३ बजेपछि मात्र एकतर्फी रुपमा यातायात सुचारु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तानसेन–तम्घास सडकखण्ड समेत अबरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्लाको क्षेत्रीय सडकमा रुपमा रहेका बाँसटारी झडेवा सडक दश दिनदेखि अबरुद्ध हुँदा यातायात सुचारु हुनसकेको छैन । सडक अबरुद्ध भएर मर्मत कार्य नहुँदा झडेवा, गोठादी, रहबासका जनताले दश घण्टा हिडेर सदरमुकाम तानसेनसम्म यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको झडेवाका स्थानीय चन्द्रदेव पन्थीले बताए ।
यस्तै क्षेत्रीयm सडककै रुपमा रहेको रामपुर आर्यभाङ्ज्याङ् सडक समेत अबरुद्ध बनेको छ । खालीवन बीरकोट, ताहुँ क्षेत्रमा पहिरो जादा सडक अबरुद्ध बनेको यात्रुले बताएका छन् । सडकअबरुद्ध हुँदा तानसेन, बुटवल, तथा काठमाडौँ जाने यात्रुलाई पैदल हिडेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ । यस्तै ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडक अबरुद्ध भएका छन् । अबिरल परेको वर्षात्लेबाटो भत्किदा यातायात सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाई भएको छ । बाढीले माडी फाँट र बाँसटारी क्षेत्र समेत डुवानमा परेको छ ।
लुङ गाविसमा घर पुरिएर ३ र खवाङ गाविसमा पनि घर पुरिएर ३ जना गरी ६ जना बेपत्ता छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयद्धारा खोजिकार्य जारी छ भने पुँजागाविसमा २ जना र अर्खामा देव बहादुर बुढा र उनका २ बच्चा गरी ५ जनाको शव मृत्यु भएको प्यूठान प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै झिमरुक नदिको किनारमा ३ जनाको शव फेला परेको तर नाम ठेगाना भने नखुलेको प्रहरी नायव उपरिक्षक रञ्जित
Previous Postपहिरोले घर पुरिएर गुल्मीमा ५ जनाको मृत्यु, २५ घरधुरी पहिरोको विचमा !Next Postशालिग्राम शीला सहित सेतीबेनी बजारका १५ घर डुबानमा !